तपाईंको यो साता: असार १४ आइतबारदेखि २० गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > राशिफल > तपाईंको यो साता: असार १४ आइतबारदेखि २० गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुस्
तपाईंको यो साता: असार १४ आइतबारदेखि २० गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुस्
admin June 28, 2020 राशिफल	0
मेष– प्रतिष्पर्धामा विवाद आउनेछ, व्यक्तिगत काम पर सर्नेछ। घरबाहिर व्यस्तता बढ्नेछ । खेलकुदमा मन जाने एवम् नयाँ मित्र भेटघाट हुनेछ । वादवि’वाद टुंगो लाग्ने एवम् साथीभाइसँग नयाँ मित्रता गाँसिनेछ । पराक्रम बढ्ने एवम् पारिवारिक भेटघाट हुनेछ । वैदेशिक यात्राको योग पर्ने एवम् साझेदारी व्यवसायमा आम्दानी राम्रो हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने अनावश्यक झमेला आउने तथा अरुबाट धोका मिल्न सक्नेछ।
वृष- सन्तानको सहयोग मिल्नेछ । विद्याध्ययनमा प्रगति देखिन्छ । कला, संगीतमा रुचि जाने एवम आम्दानीको स्तर बढ्नेछ । खेलकुद एवम् प्रतिस्पर्धामा जित हुने तथा ठुला बडाबाट सहयोग मिल्नेछ । साथीभाइको सहयोगले काम बन्ने एवम् रमाइलो यात्रा हुनेछ । पारिवारिक मेलमिलाप एवम प्रेममा प्रगति देखिन्छ । नयाँ कामको योजना बन्नेछ । समझदारीमा पुरानो वि’वाद टुंगिनेछ।
मिथुन- साताको शुरुमा मित्रतामा वा’धा आउनेछ । काममा बाधा आउने, स्वास्थ्यमा खर्च बढ्नेछ । मानसिक चिन्ता बढ्ने एवम् घरायसी मामिलामा समस्या आउनेछ । स्वास्थ्यले समस्या दिने एवम् मित्रबाट असहयोग हुनेछ । साताको मध्यमा भने सन्तानबाट सहयोग मिल्ने, व्यापारमा फाइदा हुने एवम् सम्पति जोरजम्मा हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने नोकरीमा फाइदा एवम शारीरिक परिश्रम एवम जिम्मेवारीको भार बढ्नेछ।
कर्कट- जिम्मेवारी बढ्नेछ । पुरानो काम बन्दैजानेछ । छोटो यात्रा हुनेछ । दाजुभाइबाट सहयोग एवम् पारिवारिक मेलमिलापबाट काम बन्नेछ । काममा बाेझ थपिनाले काम अधुरो रहनेछ। हतारमा काम बिग्रिनाले आर्थिक व्यय हुनेछ । छातीको बिमार देखिने एवम् स्वास्थ्यमा खर्च हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने अध्ययनमा रुचि जाने एवम् लगानीमा फाइदा मिल्नेछ । बौद्धिक जगतमा प्रशंसा मिल्नेछ।
सिँह- धनकोे कारोवारमा वृद्धि हुनेछ । आफन्तको सहयोगमा काम अगाडि बढ्नेछ । सभा एवम् गोष्ठीमा सहभागिता मिल्नेछ । नयाँ योजना सुरु हुने एवम् पुराना कामबाट फाइदा मिल्नेछ । बोलीले काम बन्ने एवम् ठुलाबडा सँग भेटघाट हुनेछ । कामको जिम्मेवारी थपिने एवम् छोटो यात्राको योग बन्नेछ । भाइबन्धुको सहयोग मिल्ने एवम् परिवारमा सद्भाव रहनेछ । साताको अन्त्यमा भने प्रेममा मनमुटाव हुने, आपसी झैझगडा बल्झिने देखिन्छ।
कन्या- आलस्यताले काममा अधुरो हुनेछ । फाइदा अरुले लिनाले लगानी खेर जानेछ । हतारमा काम बिग्रिनाले अपजसको भागीदार भइनेछ । साताको मध्यमा भने धनसम्पत्तिको जोहो हुने एवम् आर्थिक सहयोग मिल्नेछ । भोजभतेर एवम् साथीभाइसँग भेटघाट रहने तथा भोग विलासमा धन खर्च हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने रमाइलोमा खर्च हुने, पैसाको अभाव रहने एवम् वैदेशिक कामबाट झन्झट मिल्नेछ । हिड्डुल बढी हुनेछ।
तुला- सरसामान हराउन सक्नेछ । यात्रामा सास्ती हुनेछ । अनावश्यक खर्च बढ्ने एवम् सरसहयोगमा धन सकिनेछ । मानसिक चि’न्ता बढ्ने एवम योजनामा ढिलासुस्ती हुनेछ । साताको मध्यमा भने मित्रजन भेटघाट हुने एवम पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ । प्रेममा प्रगति हुनाले शंका हटेर जानेछ । साताको अन्त्यमा भने व्यापारमा फाइदा एवम लगानीमा नाफा मिल्नेछ । धार्मिक काममा व्यस्तता बढ्ने एवं सम्पत्तिको सुख मिल्नेछ।
वृश्चिक- आकस्मिक धनको लाभ हुनेछ । लगानीमा सन्तोष हुनेछ । आम्दानीको श्रोत देखिन्छ । धनको सहयोग मिल्नाले आँटेको काममा सफलता हुनेछ । कृषि एवम भुमिबाट फाइदा हुने पशुचौपायामा लाभ हुनेछ । माइति मावलीृ पक्षबाट सहयोग मिल्नेछ । राजनीतिमा पहुँच मिल्ने एवम सरकारी क्षेत्रबाट फाइदा हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने स्वास्थ्यमा समस्या एवम पारिवारिक खर्च बढ्नेछ । अनावस्यक चिन्ताले दुष्मनी बढ्नेछ।
धनु- सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ । ठुुलावडाको सहयोगले पुरानो काममा प्रगति हुनेछ । नोकरी, रोजगारीमा सफलता मिल्नेछ । धनसम्पत्तिको सुख मिल्ने एवम काममा जस पाइनेछ । लेखन एवम कलाकारितामा रुचि बढ्ने तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठा कायम रहनेछ । लगानीमा फाइदा मिल्ने तथा व्यापार व्यवसायमा आम्दानी हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने काम बिगार्ने अघि सर्नेछन् । गुप्त शत्रुको भय रहनेछ।
मकर- सामाजिक एवं धार्मिक काममा समय व्यातित हुनेछ । विदेशबाट फाइदा मिल्नेछ । सामाजिक एवं परोपकारमा व्यस्तता हुनेछ । लामो यात्रा हुने एवम पारिवारिक भेटघाट रहनेछ । धर्म कर्ममा रुचि जाने एवम सामाजिक क्षेत्रमा पहिचान मिल्नेछ । पद, प्रतिष्ठा वृद्धि हुने एवम सम्मानको योग रहेको छ । ठुलाबडाको साथ मिल्नाले आम्दानीको स्तर बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा धनको प्राप्ति हुनेछ एवं सवारी सुख मिल्नेछ।
कुम्भ- काम अधुरो हुनेछ ।अनावश्यक लाञ्छना लाग्नेछ । काममा वाधा आउनाले खर्चको लागत बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या हुने एवम प्रियजनबाट धोका हुनेछ । साताको मध्यमा भने धार्मिक यात्रा हुने एवम वैदेशिक कामबाट फाइदा मिल्नेछ । टाढाबाट सहयोग आउनाले अधुरा काम पुरा हुने देखिन्छ । साताको अन्त्यमा भने रोजगारीको अवसर मिलने एवम राजनीति एवम नेतृत्वमा राम्रो अवसर मिल्नेछ । जिम्मेवारी मा प्रशंसा आउनेछ।
मीन- वैवाहिक सम्वन्धमा प्रगति हुनेछ । प्रेममा खुशी बढ्नेछ । साथी भाइको सहयोगमा सामाजिक काम बन्नेछ । साझेदारीमा फाइदा एवम व्यावसायिक यात्रा हुनेछ । जीवनमा साथीको सहयोगले महत्वपूर्ण काम बन्नेछ । साताको मध्यमा भने काममा धोका हुन सक्ने एवम स्वास्थ्यले समेत समस्या दिन सक्नेछ । धन बढी खर्च हुने तथा काम लम्बेर जानेछ । साताको अन्त्यमा भने भाग्यले साथ दिने, अधुरा काम बन्ने एवम राजतिक नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुनेछ।
प्रस्तुति : ज्योतिष एवं वास्तुविद् सुरेन्द्र सापकोटा
दुःखद कार दुर्घटनामा एक पत्रकारकाे निधन
०७७ वैशाख ०२ गते मंगलबार ई. स. २०२० अप्रिल १४ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
०७७ वैशाख ०७ गते आइतबार ई. स. २०२० अप्रिल १९ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
बिहानै बलिउड स्टार अमिताभ बच्चनबारे आयो यस्तो समाचार!
एक वर्षकै उमेरमा नै गर्भवती भएपछि बाबुआमा आत्तिएर अस्पताल लैजादा डाक्टर नै चकित
०७७ साल असार ३० गते मंगलबार, ई. स. २०२० जुलाई १४ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
साप्ताहिक राशिफलः असार २८ देखी साउन ३ गतेसम्म तपाईको भाग्य कस्तो छ? जान्नुहाेस्